Inkonzo yewaranti- I-Shenzhen PUAS Industrial Co, Ltd.
Zonke iimveliso ezivela kwi-PUAS ngeWaranti yeminyaka emithathu.
Zonke iimveliso ezinengxaki esemgangathweni, siya kunika ngokuthe ngqo iimveliso ezintsha endaweni yeenyanga ezintathu.
Sinika kuphela i-RMA okanye iindawo zasimahla zenkonzo yokugcinwa kweemveliso ngaphezulu kweenyanga ezi-3.
Zonke izinto zomhla zabalwa nguS / N
1.Iimveliso ngaphezulu kwexesha lewaranti, isiphoso esifanayo senzeka kwinyanga ezi-3 zolondolozo oluhlawulelweyo, kwaye ziyakulungiswa simahla.
2.I-Duo yokunyanzela izizathu eziphakamileyo (ezinje ngeMfazwe, iinyikima zomhlaba, umbane, njl.
3.Zonke iimveliso kufuneka zithathe iphakheji yokuqhekeza kunye nokuhamba kwezinto zokupakisha zoqobo. Ukuba usebenzisa ukudityaniswa okupheleleyo komonakalo obangelwe luhlobo lwemveliso okanye khange asebenzise ukuthuthwa kwempahla yokuqala, ayisiyiyo eyomda wewaranti yasimahla.
4.Ukuthintela umsebenzisi ngaphandle kwemvume yokuqhaqha umatshini, umsebenzisi ahlukanise iimveliso ezilungisiweyo, ayikho ngaphakathi kwewaranti yasimahla. Kwimveliso ephosakeleyo ngexesha lewaranti, inkampani eyisebenzisileyo ibonelela ngeenkonzo zesondlo ezihlawulelweyo.
5.Ukungasebenzi kakuhle kweemveliso ngaphakathi kwexesha lewaranti, nceda ugcwalise ifomu lolwazi lwewaranti ngokufanelekileyo. Chaza ukungasebenzi kakuhle ngokweenkcukacha. Kwaye unikeze i-invoice yentengiso yoqobo okanye ikopi yayo.
6.Ngomonakalo kunye nelahleko ebangelwe kukusetyenziswa ngokukodwa komsebenzisi. Umzi mveliso awuthwali mngcipheko kwayeuxanduva. Imbuyekezo yomzi-mveliso eyenziwe ngokwaphula ukholo. Ukungahambi kakuhle okanye ukuhluthwa akunakulodlula inani
lweemveliso. Umzi mveliso awuyi kuthwala xanduva lukhethekileyo, ungalindelekanga kwaye uqhubeke nomonakalo obangelwe naliphi na elinye ixesha.
7.Inkampani yethu inelungelo lokugqibela lokucacisa la magama angasentla.
1.Umthengi kufuneka athumele iimveliso zokungasebenzi kakuhle kwidilesi yethu ebonisiweyo ngolwazi lwekhadi lewaranti.
Ukuthumela iindleko zeRMA okanye kutshintshwe enye.
2.Inkampani inika kuphela indlela yokuhambisa iindleko ukusuka kumenzi ukuya kusasazo lweChannel okanye kumthengi.
Bonke abasebenzisi bokugqibela babuyela ngqo kwinkampani yethu, nceda unxibelelane nentengiso yethu kwangaphambili.